> Resource > Video > Sida loo Beddelaan PPT si wmv
Sidaas ayaan idin abuuray collage ka mid ah xusuus in PowerPoint la sawiro iyo music asalka u qurux badan oo doonaya in ay u dhan loogu badalo in ay wmv videos, inuu u ciyaaro video si joogto ah aad PC ama BlackBerry? Dhib ma leh, samaynta PowerPoint la sawiro iyo music waa mid fudud, halka diinta PPT si wmv video muuqataa sidaas ma aha mid fudud. Si loo xaliyo dhibaatada, halkan waa faahfaahinta diinta PowerPoint in wmv.
Tool, ugu yaraan mid ka mid ah, waxa loo baahan. Mar kasta oo aad raadiso aalad internet-ka, waxaad heli karo scads ah ee loo yaqaan PPT converters ama wmv video sameeyayaal. Laakiin waxaan kaliya door bidaan Wondershare PPT2Video Pro . Waxaa aad u fiican ee diinta PPT si qaabab video ku dhowaad dhammaan caan ah, oo ay ku jiraan wmv. Iyo tayada wax soo saarka u san yahay. Halkan waxa ku jira tallaabooyin si ay u isticmaalaan Wondershare PPT2Video Pro si loogu badalo PowerPoint in wmv
1 Download iyo rakibi Wondershare PPT2Video Pro
Riix ah "Free Download" link si aad u hesho version maxkamad free of PPT2Video Pro. Markaas laba guji faylka .exe si ay u rakibi. Ka dib markii in, riix "Abuur Video Faylal ay ka PowerPoint" in ay galaan interface ee app
2 Import PPT si PowerPoint in ay wmv Converter
Riix dar xitaa ku dar PowerPoint in app, ka dibna riix Next.
Mid ka mid ah Settings interface, dooro wmv sida qaab saarka video liiska Qaabka hoos-hoos iyo riix Next.
Waxaad u arkay in ay jiraan qaar ka mid ah fursadaha qalabka. Haddii aad doonaysid in aad ka ciyaari video ku saabsan qalab, markaas dooran qalabka sida qaab wax soo saarka, waayo, goobaha default waxaa hore filaayo. Haddii ay sidaa tahay, mar dambe ma aad u baahan tahay in ay ka wel ku saabsan tayada video bartilmaameedka.
PS: goobaha Advanced daboolayaa goobaha khariidad, background image, size video ama logo, goobaha music asalka iyo doorasho codka taariikhqorihii.
4 Beddelaan PPT si wmv
Ka dib markii ay wax walba waa diyaar, dhufatey Start badhanka si ay u bilaabaan diinta PPT si wmv. Wareejinta waxaa la dhammeeyo sida neecaw. Ka dib qaab beddelidda, aad edit karaa faylka video target in Windows Movie samee, ama la wadaag saaxiibadaada ama xataa waxaa daawan on your TV.